दलान नेपाल : के हुदै छन मधेश वृतमा ?
के हुदै छन मधेश वृतमा ?
गएको शनिवार प्रमुख दलहरुले संविद्यानमा पहिलो संशोधन गरे पछि काठमाडौमा अव मधेशमा के हुन्छ भन्ने वारेमा मत प्रति मतहरु आ आफना ढंगले प्रगट भईरहेको देखिन्छ । एउटा तप्का अव गएको पांच महिना देखि अवरुद्ध नाका सुचारु हुने दावी प्रस्तुत गरेको देखिन्छ भने अर्को तप्का मधेश आन्दोलनको मुख्य माग नै सम्बोधन भइसक्यो भनेर आफनो विचार प्रगट गरेको देखिन्छ । एउटा अर्को धार पनि काठमाडौमा प्रगट भएको देखिन्छ जसले संशोधन विद्येयकले आशिंक माग सम्बोधन भइसकेको र बाकी विस्तारै मिल्दै जाला भन्ने वारेमा तर्क प्रतितर्कहरु प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । काठमाडौमा प्रगट भइरहेको पछिल्लो सबै तर्क प्रतितर्कहरुको निशानामा भारतीय पक्ष पनि देखिन्छ । काठमाडौको अधिकांशको बुझाइमा संविद्यान संशोधन पश्चात भारतले अव मधेश आन्दोलनलाई दिदै आएको धाप बन्द हुनेछ र अव सवै कुरा मिली हाल्छन भन्ने देखिन्छ । तर काठमाडौले फेरी पनि के बिर्सदै छन भने मधेशमा के भईरहेको छ ? मधेशको राजनिती वृतमा के कस्ता खालको अभ्यासहरु थालिएको छ, जसको प्रभाव के होला ? काठमाडौ अहिले केहि नेता त केहि विशेष स्रोतको हवालामा उफ्रदै छन जुन विगत झै फेरी समान्य सत्यलाई स्विकार नगर्दाको गल्ती सावित नहोला भन्न सकिन्न ।
मधेशमा के हुदै छन ?
पहिलो नम्बर - आन्दोलनरत सवै पक्ष विचको एकताको प्रयास
पछिल्ले समयमा मधेशमा आन्दोलनरत सवै पक्षको विचको एकताको प्रयास सुरु भएको दखिन्छ । आन्दोलनकै क्रममा पनि आआफनैमा विभाजित मधेशका शक्तिहरु विच विधिवत एकताको गम्भिर थालिन भएको आभास देखिन्छ । आज विराटनगरमा सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र तराई मधेश राष्यि अभियानको संयोजक जेपी गुप्ता विच लामै छलफल भएको छ । महतो र गुप्ता विचको छलफल भएकै केहि घण्टामा विराटनगरमै एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आन्दोलनरत पक्ष विचको एकताको थाली साकारात्मक रुपमा अघि वढेको बताएका छन । विगतमा यादवकै अनदारताका कारण मधेशमा रहेको दुई ओटा मोर्चा विच एकता हुन नसकेको कतिपय नेताहरुले खुल्ला रुपमै बताएका थिए । तर आज विराटनगरमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा फोरम नेपालका अध्यक्ष अव चाडै सवै आन्दोलनरत पक्ष विचको एकतालाई साकारात्मक रुपमा प्रस्तुत गरेका छन । उता दिल्लीमा उपचारर्थ तमलोपा अध्यष महन्थ ठाकुर त्यही वाट अव चाडै आन्दोलनकारीहरु विचको एकताले मुर्त रुप लिन सक्ने तर्क दिएका छन । मधेशमा आन्दोलनरत सवै पक्षविचको एकता पक्कै पनि आन्दोलनलाई थप चर्काउने नै छ । नकी काठमाडौमा भनिदै आएको जस्तो आन्दोलन अव छैन भनेर ।
दास्रो नम्बर - प्रमुख दलहरु विरुद्ध स्थानिय स्तरमा निधेष गर्नै घोषणा वढदै
रंगेलीमा एमाले सम्बद्ध युवा संघको कार्यक्रममा आन्दोलनरत मोर्चाको हिसांत्मक भिडन्त पछि मधेशका जिल्लाहरुमा प्रमुख दलहरुलाई कार्यक्रम गर्न निधेष गर्ने घोषणाको प्रतिस्पर्धा नै देखिन्छ । रंगली घटना पश्चात वारा, पर्सा, धनुषा, सिरहा, सप्तरी लगायतका जिल्लाहरमा आन्दोलनरत सवै पक्षहरुले सार्वजनिक विज्ञिपत निकाल्दै प्रमुख दलहरुलाई कार्यक्रम गर्न नदिने बताउन थालेका छन ।
तेस्रो नम्बर - सशस्त्र समुहको सम्भावित जगजगीको खतरा
तराई मधेशमा पांच महिना भन्दा वढी समय देखि जारी आन्दोलनको सम्बोधन हुन नसक्दा तराइृ मधेशको पुर्व देखि पश्चिम सम्म सशस्त्र समुहको विगविगी वढने खतरा ठोस रुपमा औल्याउन थालिएको छ । केहि हप्ता अगाडी मात्रै सप्तरीमा एउटा प्रहरी अधिकारीको हत्याको जय कृष्ण गोइतले जिम्मा लिए पछि यसले संशय पैदा गराएको छ । त्यो संगै सिरहामा एउटा शक्तिशाली बम विष्फोट पेटेल पम्पमा पनि सशस्त्र समुहले गराएको देखियो । आन्दोलन चलीरहदा सिरहाको मिर्चौया सडक खण्डमा पर्ने एउटा पुलमा अत्यद्यिक शक्तिशाली बम राखेको फेला पारेको स्थानिय प्रहरीले त्यो सगै गोइत समुहले त्याहा छरेको पर्चाहरु समेत वरामद गरेका थिए । यसरी एक पछि अर्कौ गरी संख्यात्मक हिसाव कम तर अत्यद्यिक शक्तिशाली गतिविधी सशस्त्र समुहहरु वाट हुने गरेको तथ्य तराइृ मधेशको सतहमा देखिन थालेका छन । कतिपय भित्रियाहरुका अनुसार पश्चिम मधेशमा पनि टिकापुर घण्टा पश्चात विकसित थारु समुदायका युवाहरुको मनोविज्ञानका कारण त्यस क्षेत्रमा हतियारी समुह शक्तिशाली रुपमा उदय हुने सम्भावना छ ।
चौथौ नम्बर - पृथकतावादी नारा चर्कने खतरा ।
जारी मधेश आन्दोलनको सफल र असफ व्यवस्थापनको विषयलाई मधेशको राजनिती वृतमा अवको मधेश राजनितीको एजेन्डा नै परिर्वतन हुन सक्ने संग पनि जोडिएर देखिएको छ । जे भए पनि मधेश राजनितीको अहिले सम्मको मुख्य राजनितीक एजेन्डा संघियता नै हो । जुन जारी आन्दोलनको व्यवस्थापन संग जोडिएको छ । त्यसैले मधेमा यसलाई गम्भिरतापुर्वक देखिएको छ । यदी जारी आन्दोलनले मधेशको मनोवित्रान सम्बोधन हुने गरी संघियताको व्यवस्थापन हुन नसके स्वयंम मधेशका कतिपय उच्च नेतृत्वहरुले भन्दै आएको अनुसार मधेशमा छुटै देशको नारा घन्कने सम्भावना वढेर जाने छ । जसलाई स्वयंम अहिलेका मध्यमार्गी भनेर देखिएका मधेशका राजनितीक शक्तिहरुले समेत सम्हालन सक्ने अवस्था हुदैन ।
अन्तमा, मधेश वृतमा भईरहेको यो पक्षका खेलाडीहरु संविद्यान संशोधनलाइ कसरी लिइरहेको छन , विचारनीय प्रश्न यो छ । काठमाडौले यसलाई कतिको नजरमा राखेर विचार बनाउन सकिरहेको छ त ? मधेशमा देखिएको चार ओटै धारहरु आ आफनो ठाउमा शक्तिशाली हुदै गएको देखिन्छ, जुन भोलीका लागी काठमाडौ माथी अत्यद्यिक हावी हुने निश्चित छ ।